May 2020 - Page5of 59 - Myanmar Fire Services Department
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုသတင်း
(၂၈.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ (၀၉ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ သီတာလမ်းရှိလုံးပတ်(၃)ပေ၊ အမြင့်(၃၀)ပေခန့်ရှိသောမဲဇလီပင်နှင့် အမှတ် (၁၅)ရပ်ကွက်၊ သီဟိုဋ္ဌ်ရှင်လမ်းရှိလုံးပတ်(၆)ပေ၊...
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၅)၊ ချယ်ရီလမ်းတွင် မိလ္လာကျင်းအပေါက်အတွင်း (ပိုလီ� ....
(၂၈.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၀၈ ၄၀)အချိန်ခန့်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မိတ္ထီလာမြို့၊ အောင်ဇေယျာရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၅)၊ ချယ်ရီလမ်း၊ အိမ်အမှတ်(၂၂၇)နေပိုင်ရှင် ၏ အိမ်ခြံဝင်းအတွင်းရှိအလျား(၁၀)ပေ၊ အနံ(၆)ပေ၊ အနက်(၁၀)ပေရှိမိလ္လာကျင်း၏ (၂x၂)ပေ၊ အပေါက်အတွင်းသို့ ပိုင်ရှင်၏...
Fallen Tree at Mayangone Township
28.5.2020 at about 8:00- Malaysia Padauk Tree (1½ feet in girth and 20 feet tall) fell down at Satetathukha Road, No.5 Quarter, Mayangone township due to the rain. At about 8:25 1 Rescue Truck,5members and3auxiliary fire members of North Okkalapa Fire Station...
Rainstorm at Putao Township, Kachin State
28.5.2020 at about 6:00 – Aurasa Tree (40 Feet tall and4feet in girth) fell down and block on the Park Road, Kaungtahtaung Quarter, Potao Township, Kachin State. At about 6:05 – 10 members of Putao Township Fire Station cleaned and removed the debris and fallen tree...
Strong winds in Leway Township
28.5.2020 at about 06:00- A Flea tree in girth of3feet fell down onahouse of (15’x10′) at Pantin Village, Pyaungkhaunggyi tract, Leway Township, Naypyitaw, Myanmar. At about 09:30,6members and 1 firefighter of Tharwuthti Local Fire Station cleaned...
Page5of 59« « Previous...34567...102030...Next »